Real Madrid oo diiday dalab Chelsea ku doonaysay Modric
HomeSpainReal Madrid oo diiday dalab Chelsea ku doonaysay Modric
Kooxda Chelsea ayaa lagu wargalliyey inay joojiyaan isku dayga ay ku doonayaan laacibka khadka dhexe ee naadiga Real Madrid ee Luka Modric.
Jose Mourinho ayaa rumaysan in laacibkan 28 jirka ahi uu wax weyn ka tari karo baahida khadka dhexe ee haysata naadiga The Blues , sidaas darteedna sameeyey dalab uu ku codsanayo in xagaagan laga soo dajiyo Stamford Bridge xidiga qaranka Croatia.
Modric oo mar aan fogayn carabaabay in goor ay noqotaba uu ku noqonayo London ayaa ilo ku dhow dhow oo u waramay shabakada Gaol.com , waxay u xaqiijiyeen in ciyaaryahanku ku faraxsan yahay joogitaanka Madrid wakhti xaadirkan.
Laakiin Real Madrid ayaaba ka soo horeysay oo xaqiiqda xaalada ciyaaryahanka si hoose ugu sheegtay shabakada Goal , waxaanay xuseen inaanay dheg jalaq u siinayn dalabaadka lagu soo codsanayo laacibkan heshiiska uu naadiga kula joogo ay uga hadhsan yihiin, saddex sanno oo kale.
“Modric wuxuu ku jiraa diirada koobaad ee tababare Mourinho si uu ugu xoojiyo khadkiisa dhexe xagaagan, sidoo kalena waxaa taageere weyn u ah ciyaaryahankan Roman Abramovich – laakiin xaqiiqdu waxay tahay inaanay jirin meel kale oo uu uga ambabaxayo halkan,” ayay ila wareedka Goal ku yidhaahdeen.
Fariid: Cristiano Ronaldo oo dhaliyay Shanlay Jabiyeyna Rikoodhkii Raul, Xilli Kooxdiisu Xasuuqday Espanyol
12/09/2015 Samatar Mohamed
Eeg shan Xiddig Oo ku fashilmay u ciyaarida kooxda Real Madrid